Ny fiasa amin'ny Samsung Galaxy S7 dia voasivana | Androidsis
Alfonso de Frutos | | About us, Samsung
La ny edisiona manaraka an'ny MWC dia eo akaiky eo ihany; Amin'ny 22 febroary, ny foara telefaona lehibe indrindra eto an-tany dia hanome ny fanombohany manokana, izay, toy ny isan-taona, dia hatao ao an-tanànan'i Barcelona. Ary amin'ny fahatongavan'ity hetsika ity dia tsy miato ny fitomboan'ny tondra-drano.
Iray amin'ireo toeram-piantsonana andrasana indrindra ny Samsung Galaxy S7, ny sainan'ny mpamokatra Koreana manaraka. Izahay dia efa nahita ny famoahana ahoana no antenaina . Ary fotoana izao hijerena ireo toetra teknika Samsung Galaxy S7 (SM-G930F), nahazoana lalana avy amin'ny AnTuTu.
AnTuTu dia manambara ny toetra ara-teknikan'ny Samsung Galaxy S7 miaraka amin'ny processeur Exynos
Ary io vavahady malaza io dia namoaka tamin'ny alàlan'ny kaonty Weibo misy fanambarana izay miresaka momba ny kinova ao amin'ny Samsung Galaxy S7 miaraka amin'ny processeur Exynos 8890.
Amin'ity fanambarana ity dia manondro fa nisy terminal vaovao nipoitra tao amin'ny tahiry, misy laharana serial SM-G930F, izay mety ho ny Samsung Galaxy S7 amin'ny kinova Exynos.
Raha ny filazan'ny bandy AnTuTu dia tsy hiova amin'ny Samsung Galaxy S7 miaraka amin'ny SoC io telefaona io Snapdragon 820, noho izany dia andrasana ny efijery Super AMOLED 5.1-inch izay hahatratra ny fanapaha-kevitra 2K (1440 x 2560 teboka), ankoatry ny fananana processeur an'ny Samsung flagship ary RAM 4-DDR4 karazana XNUMX GB.
Ny maodely nodinihina dia manana fahatsiarovana anatiny 64 GB, tsy fantatray raha azo hitarina izany slot micro SD card. Raha raisina ny adihevitra nateraky ny tsy fisian'ny fanohanana amin'ny Samsung Galaxy S6 sy S6 Edge, ny zavatra azo lojika indrindra dia ny famahanan'i Samsung izany tsy fahombiazana izany, niresaka momba io mety hiseho io mihitsy aza isika, saingy tsy misy azo antoka.
Ary farany, ary raha tsy mandainga ny angon-drakitra AnTuTu dia hanana fakantsary lehibe ahitana ny solomaso 12 megapixel ary ny masinina voalohany an'ny mpamokatra Koreana. aoriana 5 megapixel hafa.
Izao fotsiny isika dia mila miandry ny 20 Febroary, ny daty azo antoka fa hanolotra amin'ny fomba ofisialy ireo mpikambana vaovao ao amin'ny fianakaviana Galaxy S i Samsung mba hahitana izay hatairan'ilay goavambe Koreana antsika. Raha raisina ho avo lenta izy io, ankehitriny dia toa lojika sy mety amiko ny toetrany ara-teknika. Ny hany maneno kely dia ny 64 GB fitehirizana anatiny, na dia tena azo inoana aza fa, toy ny mahazatra, Samsung dia handefa ny Samsung Galaxy S7 miaraka amina fikirakirana samihafa arakaraka ny fahatsiarovan'ny ao anaty ilay fitaovana. Na dia mety ho ilay goavambe avy any Seoul ihany aza no manolotra ny Samsung Galaxy S7 miaraka amin'ny 64GB ny fahatsiarovana anatiny fa tsy misy ny mety hanitarana azy amin'ny alàlan'ny karatra micro SD.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » AnTuTu dia manambara ireo toetra ara-teknikan'ny Samsung Galaxy S7, kinova Exynos, ary mampanantena benchmark vaovao tsy ho ela
Mega Tutorial: Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao mba hametrahana RemixOS amin'ny PC amin'ny USB